Askari baabuur ku jiiray Göteborg xilli uu ku raad joogay niman dukaan soo dhacay | Somaliska
Askari baabuur ku jiiray Göteborg xilli uu ku raad joogay niman dukaan soo dhacay
Magaaladda göteborg, ayaa afar nin waxaa ay dhac u geeysteen dukaan yar oo ku yaala bariga Göteborg. Booliska oo dhacaan lugu wargeliyey ayaa baadi goob ugu dhaqaaqay tuugtii, waxaana ay tani keentay in mid ka mid ah askartii eryeyneeysay tuugadaas uu gaari ku jiiro wadada weyn ee loo yaqaano E20.
Dhacdadaan ayaa maanta bogga internet-ka ee booliska waxaa ay ku sheegeen ineey tahay arrin xanuun leh oo ka baxay qof ka tirsan ciidanka ammanka eheladiisana lugu wargeliyey.Ninkii dugaanka lahaa oo la hadlayey talefeyshinka SVT ayaa u sheegay in madaxa ay kaga dhufteen wax u eg baastoolad, waxaana ay qaateen lacag gaareeysa 40.000 (afartan kun) oo karoon.
Sadex ka mid ah ayaa gacanta lugu soo dhigay raggiii dhaca u geeystay dukaanka, halka goor dambe isagana la soo qabtay nin lugu tuhmayo inuu qeyb ka ahaa falkaasi dhaca ah. Booliska ayaa qadar daqiiqado ahi ka dib waxaa ay qabanayaan shir jaraa’id oo ay kaga hadlayaan shilka dhacay ee uu ku dhintay askari ka mid ah ciidamadda ammaanka xilli uu ku guda jiray howshiisa.